Sida Loo Shaqsiyeeyo E-maylladaada Gaarsiinta Si Aad U Hesho Jawaabo Haboon Oo Fiican | Martech Zone
Suuqgele kasta wuu ogyahay in macaamiisha maanta ay rabaan khibrad shaqsiyeed; in aysan mar dambe ku qanacsaneyn oo kaliya inay yihiin tiro kale oo ka mid ah kumanaan diiwaanka qaan-sheegashada ah. Xaqiiqdii, shirkadda cilmi baarista ee McKinsey waxay ku qiyaaseysaa abuuritaanka a khibrad adeegsi oo gaar ah waxay kobcin kartaa dakhliga ilaa 30%. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo suuqyayaashu ay si fiican u sameynayaan dadaal ay ku hagaajinayaan isgaarsiintooda macaamiishooda, qaar badan ayaa ku guuldareysanaya inay qaataan isla qaab isku mid ah rajadooda gaarsiinta emaylkooda.
Haddii macaamiisha ay raadinayaan shakhsi ahaaneed, waxaa macquul ah in loo qaadan karo in dadka wax saameeya, kuwa wax qora, iyo milkiilayaasha bogagga ay raadinayaan khibrad la mid ah. Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed waxay u egtahay xal fudud si loo hagaajiyo heerka jawaabta, sax? Hubaal. Laakiin shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed ee emaylku waxay aad uga duwan tahay shakhsi ahaanshaha suuqgeynta macaamiisha, waana tan sababta qaar ka mid ah suuqleyda aysan u arkin guulo cad.
Suuqgeynta macaamiisha, suuqleyda waxay u badan tahay inay kala qeybiyeen xiriirradooda ayna abuureen xulasho yar oo emayllo ah si ay uga codsadaan qof kasta oo qaata kooxdaas. Marka lagu jiro ololayaasha fidinta, si kastaba ha noqotee, qayb kooxeed runtii kuma filna. Dulucyadu waxay u baahan yihiin in lagu shakhsiyeeyo heer shaqsiyeed si ay u yeeshaan saameynta la doonayo iyo tan ugu fiican tanina, dabcan, macnaheedu waa baahi loo qabo cilmi baaris heer sare ah.
Muhiimadda ay Leedahay Cilmi-baarista Gaarista
Waxay noqon kartaa wax aad u dhib badan - haddii aysan macquul ahayn - in si guul leh loo shakhsiyeeyo garoon iyada oo aan marka hore la samaynin qoto dheer cilmi-baaris. Cilmi-baaristu waa lama huraan, gaar ahaan waqtiga Madaxa Google ee Spam-ka Matt Cutts uu kala hadlayo baloogyada martida inay noqdaan 'aad iyo aad u badan dhaqanka spammy'. Bloggers waxay raadinayaan wax badan; dadka runtii dadaalka galiyay sidii fikradahooda loo maqli lahaa.
Si kastaba ha noqotee, 'cilmi baaris', tusaalahan, kaliya maahan inaad ogaato magaca qof iyo inaad dib u xasuusato cinwaanka boostada dhowaan; waxay ku saabsan tahay dhex-galka caadooyinka internetka ee qofka aad heysato, dookhooda, iyo dhadhankooda dalab ah inaad ka qayb-gasho… adigoon u muuqan wax aad u badan sida dabagalka internetka, dabcan!
4 Siyaabood oo Shaqsiyan E-maylladaada Loogu Sameeyo Cilmi Baaris
Markay tahay wacyigelinta iyo sameynta aragti hore oo xoog leh oo qiimo leh, waxaa lagama maarmaan ah in suuqleydu aysan ku dhicin dabinka sameynta guud khaladaadka suuqgeynta emaylka. Gawaarida shakhsi ahaaneed way adkaan kartaa in la saxo, laakiin 4-taan tilmaam ee ku habboonaynta emayllada fidinta waxay hagaajin kartaa fursadaha guusha:
Shakhsiyeela khadkaaga Mawduuca - Meesha ugu horeysa ee laga bilaabayaa waa khadka maadada emailkaaga. Cilmi baaris ayaa muujisay in xariijin maaddo shaqsiyeed ay awoodaan kordhinta sicirka furan boqolkiiba 50, laakiin waa maxay habka ugu fiican ee loogu daro taabashada shaqsi ahaaneed madaxaaga? Xaaladdan oo kale, waxay uga badan tahay shakhsiyaynta shucuurta marka loo eego shaqsiyeynta tooska ah. Kaliya ku darida magaca qaataha khadkaaga maadada ma jareyso. Xaqiiqdii, tani runti waxay noqon kartaa dhaqan waxyeello leh maadaama ay si dhakhso leh u noqotay taatiko guud oo ay adeegsadaan shirkadaha diraya emayllada iibka aan loo baahnayn Taabadalkeed, iskuday inaad diirada saarto dhinaca qiirada; bartilmaameedka dulsaarka. Miiqda fikradaha mawduucyada si aad ula kulanto nuuca qaataha, oo xusuusnow: kan labada erey ee hore oo ah khad kasta oo maaddo ah ayaa ugu muhiimsan! Isha sawirka: Neil Patel
Aqoonso Fursadaha Kale ee Shakhsi ahaaneed - Khadka maadada maahan meesha kaliya ee ay suurtogalka ka tahay in lagu daro taabasho shaqsi ahaaneed garoonka. Tixgeli haddii ay jiraan fursado kale oo aad ku habeyn karto garoonkaaga si aad si fiican ula macaamisho helaha. Hadda waa waqtigii si dhab ah loogu dhegi lahaa cilmi-baarista. Tusaale ahaan, runtii ma jiraan wax doorbid caalami ah oo ku saabsan nooca nuxurka. Halka qaarkood ay doorbidaan inay arkaan maqaallada, kuwa kale waxay doorbidaan sawir-qaadis iyo muuqaallo kale oo muuqaal ah, qaar waxay doorbidaan sawirro iyo fiidiyowyo, kuwa kalena waxay doorbidaan qaab sii-dayn saxaafadeed oo dheeri ah. Muxuu qaataha helaa? Dabcan, xiriir kasta oo lagu soo daro garoonka dhexdiisa iyo shaqadaada waa inuu ahaadaa mid ku habboon danaha qofka qaata, iskuna day inaad ku darto qaar ka mid ah ereyadooda iyo codkooda waxyaabaha aad ka kooban tahay. Isha Sawirka: Dembiile ahaan
Sare Usoco iyo Beyond - Mararka qaarkood, talooyinka 1 iyo 2 kaligood kuma filna inay bixiyaan rajooyin fidin oo khibrad buuxda oo shaqsi ahaaneed leh. Waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in laga gudbo wixii ka dambeeya si dhab looga istaago. Tixgeli tixraacida qoraalada laxiriira ee boggaga ee qaataha uu si toos ah uxushay waagii hore, ama xitaa tixraacida qoraalada boggooda iyagoo isku dayaya inay laxiriiraan fikradahooda aragtidaada fikradahaaga. Waxaa laga yaabaa xitaa inaad u soo jeediso talooyin ku saabsan ilo kale oo laga yaabo inay xiiseynayaan iyada oo ku saleysan dhaqankooda iyo ficilladooda internetka. Haddii qofka qaataha ah uu adeegsado muuqaalo badan si uu ujeedkooda uga gudbo, ku dayasho tan garoonka dhexdiisa. Isticmaalka shaashadaha ku habboon, tusaale ahaan, waxay ku qasbi kartaa qofka qaata inuu fiiro gaar ah u yeesho.
Ka Faa'ideyso Qalabka La Heli Karo - Ma dafiri karo shaqsiyayntaas shaqsi kasta oo qaata - oo ka soo horjeedda shaqsi ahaanta liisaska macaamiisha kala jaban - waxay qaadataa dadaal badan oo suuqleyda badankood aysan waqti u helin. Tani macnaheedu maaha in xayeysiisyada emaylka aan la shakhsiyeyn karin. Xaqiiqdii, emayllada ayaa shaqsi ahaan loo adeegsan karaa iyadoo la adeegsanayo aaladaha suuqgeynta ee otomaatiga ka dhigaya dhinacyo badan oo geeddi socodka ah. Qalabkani wuxuu gacan ka geysan karaa in lagu aqoonsado danaha blogger-ka iyada oo loo marayo falanqaynta nuxurka, iyo sidoo kale la socoshada isgaarsiinta gudaha iyo dibedda labadaba si loogu oggolaado suuqleydu inay si dhakhso leh oo fudud dib ugu noqdaan wadahadalladii hore Xaaladaha qaarkood, waa lagama maarmaan in la adeegsado qalabkan la heli karo si loo hubiyo in ololaha fidinta uu si habsami leh ugu socdo.
Helitaanka Dheelitirka Saxda ah
Tilmaamaha ugu dambeeya ee waxtar leh ee kor ku xusan, iyadoo faa'iido leh, wuxuu furaa daasad dixir ah oo weyn. Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed waa shay aad u gaar ah oo shaqsi ah, sameynta xiriir adag oo bini-aadam-bini-aadam badiyaa laguma guuleysan karo is-gaarsiinta oo keliya. Helitaanka isku dheelitirnaan sax ah oo udhaxeysa talooyinka gacanta iyo otomatiga dheeriga ah ayaa fure u ah abuurista garoomo shaqsiyadeed oo dhiirrigeliya, ka qayb qaata, iyo beddelaad.
Tags: emailTusmada Emailkawacyigelinta emaylkashaqsiyeynta emaylkagaroonka garoonkawacyigelinpr emaylpr fidintapr garoonkagaarsiinta xiriirka bulshadagaroonka xiriirka bulshada
Antonija waa khabiir ku xeel dheer suuqgeynta internetka ee 'Point Visible', oo ah hay'ad suuq geyn ah oo bixisa iskuxirka dhismaha iyo adeegyada suuq geynta dijitaalka ah. Waxay si weyn u xiiseyneysaa suuq-geynta dijitaalka ah iyo meel jilicsan oo loogu talagalay naqshadeynta garaafka. Weligeed kama daalin raadinta dhiirrigelinta cusub, dhageysiga muusikada ay jeceshahay iyo sameynta sawirro dhijitaal ah.